ဟင်းလျာ-၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ”ကြက်သားတို့ဟူး မြေအိုးဟင်း” | Wutyee Food House
« ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချို
ပုဇွန်လုံး ချိုချဉ်ကြော် »
ဟင်းလျာ-၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ”ကြက်သားတို့ဟူး မြေအိုးဟင်း”
October 15, 2010 by chowutyee
-Wutyee Food House ကို ၀တ်ရည်စလုပ်ဖြစ်တာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့ကပါ။ ဟင်းလျာ အမျိုးပေါင်း ၁၀၀ပြည့်နေ့ အထိမ်းအမှတ်တရ အနေနဲ့ ဒီ post လေးကို တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
-၀တ်ရည်ရဲ့ အဓိက အလုပ်ကတော့ စာရေးသားခြင်း ဖြစ်ပြီ စာရေးဆရာမ တစ်ဦး ဖြစ်ချင်သူပါ။ ဟင်းချက်တာကတော့ ၀တ်ရည်ဘ၀ရဲ့ ဒုတိယအရေးဆုံး အရာ တစ်ခုပါ။ တစ်နေ့လောက် ဟင်းမချက်ဖြစ်ရင် ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာလေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ၀တ်ရည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် Staresourse မှာဟိုတယ် ဟင်းအချက်ပြုတ်နည်းကို စေတနာ အပြည့်ဖြင့် သင်ပေးခဲ့သော ၀တ်ရည်ရဲ့  ဆရာများကိုလည်း ခုထိ ရင်ထဲက ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးပါဘူး။
-နောက်ထပ် ဟင်းလျာ ၂၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့လေးကိုလည်း ပြုလုပ်ချင်ပါသေးတယ်။ ဟင်းလျာသစ်များကို တတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက်တင်ရှိသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
-Wutyee Food House မှာအားပေးသော ဟင်းချက်ဝါသနာတူ ညီအကို၊မောင်နှမများ အားလုံးကို အထူး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပါ။
၁။ ကြက်သား (ရင်ဗုံသား) – ၂၀ကျပ်သား (အပါးအစောင်းလှီးပါ)
၂။ တို့ဟူး – ၂ခု (အ၀ိုင်းအတုံးလေးများတုံးပါ)
၃။ မုန်ညင်းစိမ်း(တရုတ်မုန်ညင်း) – ၁စည်း (၁လက်မအရွယ် ပါးပါးလှီးပါ)
၄။ မုန်လာဥနီ – ၁ဥ (ပါးပါးလှီးပါ)
၅။ မျှစ်(ချို) – ၃ခု (ပါးပါးလှီးပါ)
၆။ ကော်မှုန့် – စားပွဲရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း (ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ဖျော်ထားပေးပါ)
ရ။ ကြက်ပြုတ်ရည်(သို့)ရေ – လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်ုးလုံး ၁လုံးစာ
၈။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
အရသာ အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၂။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၃။ ပဲငံပြာရည်(အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း
၄။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ၁ပုံ
၅။ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁။ အ၀ိုင်းလေးများ တုံးထားသော တို့ဟူးများကို ဒယ်ထဲ ဆီဆီများများထည့်၍ အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ကြော်ပေး၍ ပန်းကန်တစ်ခုထဲ ပြန်ဆယ်ထားပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ပါးပါးအစောင်းလှီးထားသော ကြက်သားများကို (ခရုဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) တို့ကို ရောနယ်လိုက်ပါ။
၃။ ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့်ပြီ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီသပ်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲသို့ ရောနုယ်ထားသော ကြက်သားများကို ထည့်ပြီ မွှေလိုက်ပါ။
၅။ နောက်မှ မုန်လာဥနီ၊ မျှစ်တို့ကို ထည့်ပြီ ကြက်ပြုတ်ရည်များကို လောင်းချလိုက်ပါ။
၆။ အရသာ အပေါ့အငံ့အတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ သကြား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ကျန်ခရုဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) တို့ကို ရောထည့်မွှေလိုက်ပါ။
ရ။ အရသာအနေတော်လျှင် ကြော်ထားသော တို့ဟူးများကို ထည့်မွှေလိုက်ပါ။ ပြီးမှ ဒယ်ထဲမှ မြေအိုးထဲသို့ ပြောင်းထည့်ပေးပါ။
၈။ မြေအိုးကို မတည်ခင် မုန်ညင်းရွက်များထည့်ပြီ အဖုံးအုပ်၍ ၁မိနစ်ခန့် မြေအိုးကို မီးအသင့်တင့်ဖြင့် တည်ထားပေးပါ။
၉။ မြေအိုး ပွက်ပွက်ဆူလာမှ ဖျော်ထားကော်ရည်ကို အဖုံးဖွင့်၍ လောင်းချပြီ ရောမွှေလိုက်လျှင် အရသာအထူးကောင်းမွန်သည့် ကြက်သားတို့ဟူး မြေအိုးဟင်းကို ထမင်းဖြင့် ပူပူနွေးနွေး စားသုံးနိုင်ပါပြီ….
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 18 Comments
on October 15, 2010 at 8:51 am | Reply hmone
wow congratulation for 100th curries 🙂 look ver yummy…so i can eat 100 curries when i come back home lol 😛 i will be elephant for sure hee
on October 15, 2010 at 9:34 am | Reply chowutyee
ဟုတ်သားပဲ.. ကိုယ်ပြန်လာရင် ဟင်းလျာ အမျိုး ၁၀၀တောင် စားရမှာ.. မှုံကြီး ကိုယ်ဝသွားရင်၊ ငါနဲ့ ဆိုင်ဘူးနော်.. ငါကတော့ ကျွေးမှာပဲ.. ဟီးဟီး.. 😛
on October 15, 2010 at 9:50 am | Reply Nai
Congrats! Hope you can write more in the future.
on October 15, 2010 at 9:55 am | Reply chowutyee
Ma Nai, ကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
on October 15, 2010 at 10:27 am | Reply အိပ်မက်ရှင်
ဟင်းလျာ (၁၀၀) ပြည့်ပွဲကို တက်ရောက်လာပါတယ် မဝတ်ရည် … ။
ဒီထက် ဆန်းသစ်ပြီး၊ ဒီထက် ပိုလို့ ခံတွင်းမြိန်စေမယ့် ဟင်းလျာများကို
တီထွင်ဖန်တီး ချက်ပြုတ် တင်ဆက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း … ။
on October 15, 2010 at 2:24 pm | Reply chowutyee
အိပ်မက်ရှင် တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်… ကျေးဇူးပါ.. 😛
on October 15, 2010 at 5:18 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဟင်းချက်နည်း ၂၀၀ပြည့်ရင် အပြင်မှာ တကယ်ကျွေးရမယ်နော်.. ဒါဘဲ
မြန်မြန် ၂၀၀ပြည့်ပါစေ။။း)
on October 16, 2010 at 3:19 am | Reply chowutyee
ဟားဟား.. ဟုတ်ကဲ့ပါ မချော ဟင်း၂၀၀ပြည့်လို့မှ မကျွေးရင် အ၇ိုက်ခံရတော့မှာ သေချာတယ်.. ကျွေးပါ့မယ်… promise..ဟီးဟီး.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်၇ပါစေ… 🙂
on October 16, 2010 at 4:46 pm | Reply Kay Kay
ကျေးဇူးပါပဲ မမ၀တ်မှုန်ရေ… တကယ်ချက်စားဖြစ်ပါတယ်..မမကို ကျေးဇူး 🙂
on October 17, 2010 at 4:08 am | Reply chowutyee
ကေကေရေ… ချက်စားဖြစ်လို့လဲ ၀တ်ရည်က ကျေးဇူးပါနော်.. ဟီးဟီး ၀တ်မှုံ မဟုတ်ဘူး။ ၀တ်ရည်ပါ… ၀တ်ရည် အမွှာနံမည်ကမှ ၀တ်မှုံပါ.. ဘာပဲခေါ်ခေါ် တူတူပဲပေါ့နော်.. 😛
on October 17, 2010 at 5:45 pm Kay Kay
on October 18, 2010 at 3:39 am | Reply avocado
on October 18, 2010 at 8:14 am | Reply chowutyee
avocado ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ.. 🙂
on November 26, 2011 at 4:48 am | Reply Soe Ei Ei Phyu
ဒီထက်ပိုဆန်းသစ်တဲ့ ဟင်းလျာတွေ အများကြီင်္းချက်ပြီး Post တင်နိုင်ပါစေ…… လို့ ဆုတောင်းပေးလျက်
on November 27, 2011 at 2:05 pm | Reply chowutyee
Thanksalot sis! 😀
on February 6, 2012 at 4:52 am | Reply fkthet
ချိုရေ စိုက်ပျိုးေ၇းကျောင်းသူဖြစ်လို့ စီနီယာတန်းက အမကြီးအနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အမက ၁၉၇၉ ခုနှစ်က ကျောင်းဆင်းပါတယ်။ အချက်အပြုတ်ဝါသနာပါပေမဲ့ ဗမာဟင်းတော့မဟုတ်ဖူး။ ကချင်ပြည်နယ်သူပီပီ အစားအသောက်ကအပြတ်ခုံမင်တယ်။ ရေဆင်းအကြောင်းသိတဲ့အတိုင်းဘဲ ပိုက်ဆံရှိလည်းစားစရာမရှိဘူး။ ဒီတော့ကိုယ်တိုင်လုပ် စားရင်းနဲ့။ အများကြီးကောင်းပါတယ်။ လုပ်ဖြစ်တယ်လေ ဆွမ်းလောင်းဖြစ်တယ်။ ဟင်း ဖြစ်ဖြစ်မုန့်ဖြစ်ဖြစ် တခွက်ပေါ့
on February 8, 2012 at 9:37 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါ မရေ… 🙂
on May 14, 2012 at 2:00 pm | Reply About: Cho Wut Yee